Akhriso: War murtiyeedka Ka Soo Baxay Shir Madaxeedka IGAD Oo Dhameystiran – Goobjoog News
Xasan Sheekh “Madasha Xisbiyada Qaran Waxay Dhiira Gelinaysaa Shirka Maxda Maamul Goboleedyada ”
Akhriso: War murtiyeedka Ka Soo Baxay Shir Madaxeedka IGAD Oo Dhameystiran
Shir madaxeedka IGAD ee Isniintii ka dhacay Adis Ababa waxaa laga soo saaray war murtiyeed si aad ah looga hadlay xaallada Koofurta Suudaan.
War murtiyeedka waxaa magaca Soomaaliya lagu sheegay labo jeer, marka la sheegayey ka soo qeybgalka ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Khayre iyo ergey gaar ah oo IGAD u soo magacawday Soomaaliya, inta kale waxaa looga hadlay Koonfurta Suudaan iyo dalal kale.
Madaxda IGAD waxaa ay si aad ah u adkeeyeen in loo baahan yahay shirar caalami ah oo looga hadlayo arrinta Koonfurta Suudaan, in la sii wado dib u heshiiisiinta, la adkeeyo xabad joojinta, la taageero dalalka martigeliya qaxootiga iyo in lagu dadaalo howlaha banii’aadamnimada iyada oo la ciqaabayo ciddii carqaladeysa.
War Murtiyeedka, Halkan Ka Akhriso:
Waxaa la tilmaamay war-murtiyeedyada ay horay IGAD iyo IGAD plus uga soo saareen xiisadda Koofurta Suudaan bishii August 2015.
Waxaa la qaatay warbixinta uu soo gudbiyay madaxa guddiga qiimeynta iyo dabagalka ee Festus Mogoe.
Waxa ay qadarin u muujiyeen dadaalka uu wado guddoomiyaha guddiga dabagalka si uu ugu caawiyo kooxaha in horumar laga gaaro xagga ammaanka iyo dimuqaraadiyadda.
Waxaa la qiray in horumar-ka illaa hadda laga gaaray sidii lagu dhisi lahaa dowalad qaran oo ku meel gaar ah, gole baarlamaan iyo sameynta Dastuur ku meel gaar ah.
Waxaa lagu celiyay inay muhiim tahay fulinta dhammaan heshiisyadii la gaaray si dalkaasi looga hirgaliyo nabad iyo xasilooni.
Waxaa la soo dhaweeyay wada hadalka qaran ee uu ku baaqay madaxweyne Salva Kiir, kaas oo uu ku dhawaaqay 22 bishii May 2017, waxaana lagu dhiiro galiyay xukuumadda ku meel gaarka ah in ay la timaado qorshe dadka kulmiya, daahfurnaan iyo hufnaan ku dheehan.
Waxay soo dhaweeyeen ku dhawaaqista hal dhinac ah ee madaxweyne Salva Kiir ee xabad joojinta iyo sida taliyeyaashiisa uu ugu amray inay joojiyaan xabadda, iyagoo oo ugu baaqay kooxaha mucaaradka in ay dhankooda xushmeeyaan xabad joojinta.
Waxaa ay si aad ah u cambaareeyeen dagaallada socda ee dhexmaraya dowladda iyo mucaaradka, kuwaas oo sababay in malaayiin ay ka qaxaan Koofurta Suudaan isla markaana ay magan galaan wadamada deriska.
Waxaa ay caddeeyeen in kooxaha ku dagaallamaya Koonfurta Suudaan ay si isku mid ah ay mas’uul uga yihiin dhibaatada bani’aadanimo ee ka jirta dalkaasi, IGAD oo kaashaneysa Midowga Africa iyo Qaramada Midoobay waxa ay talaabo ka qaadi doonaan qof ama kooxdii lagu helo howlo ka dhan ah bani’aadanimada ama waxyeeleeya xaquuqul inasaanka.
Waxaa ay ka shallaaynayeen dib u dhaca ku yimid in ciidamo la geeyo dalkaasi iyaga oo go’aansaday in kulan loo qabto dowladaha ciidamada soo diraya, dowladda qaran ee ku meel gaarka ah iyo Qaramada Midoobay si looga hadlo waxa hortaagan .
Waxaa la isla gartay in gargaar bani’aadanimo lala gaaro dhammaan muwaadiniinta Koofurta Suudaan si aan kala sooc laheyn .
Waxaa ay walaac ka muujiyeen dilka loo geysto shaqaalaha hay’adaha gargaarka, iyaga oo dowadda ku meel gaarka ugu baaqay in ay qaado tallaabooyin lagu fududeynayo howlgallada bani’aadanimo isla markaana caddaaladda lagu horkeenayo dadka fal-dambiyeedka ka gala howl-wadeennad gargaarka.
Waxaa la ammaanay dadaallada xukuumadda KMG ah ay wado sida dhismaha guddiga la socda howlaha gargaarka bani’aadanimo iyo in waddooyin cusub ay u furto, waxaa ammaan taas la mid ah loo soo jeediyay dowladaha Suudaan iyo Kenya .
Xubnaha ku jira urur goboleedka IGAD waxa ay xaqiijinayaan in ay hal meel ka taagan yihiin dhibaatada iyo xalka Koofurta Suudaan iyaga oo soo qaatay wadashaqeynta dhexmartay guddoomiyaha IGAD, gudoomiyaha Midowga Afrika iyo xogheyaha guud ee Qaramada Midoobay .
Waxaa ay ku baaqeen in shir heer sare ah loo qabto kooxaha Koonfurta Suudaan oo looga hadlayo xabad joojinta, hirgalinta heshiisyada iyo in waqti loo sameeyo doorasho dimuqaraadi ah oo dalka ka dhacda. Golaha xogheynta IGAD oo kaashaneysa dadka ay arintaani khuseyso in ay howsha fududeeyaan .
Waxaa loogu baaqay Midowga Yurub iyo IGAD qabashada shir ay ka qeybgalayaan saaxiibada JMEC oo looga hadlayo arimaha lagu soo qaaday qodobka 15-aad.
Waxaa la aqoonsaday taageerada ay beesha caalamka ka geeysatay arrimaha bani’aadanimada, dagaallada iyo abaaraha ka jira Koofurta Suudaan, iyada oo loogu baaqay beesha caalamka inay labo jibaaraan dadaalkooda ay culeyska uga qaadayaan dowladaha deriska ee marti-galiyay qaxootiga Koofurta Suudaan .
Waxaa loo mahadceliyay Midowga Afrika iyo Qaramada Midoobay, Trika, Shiinaha, IPF, deeq-bixiyeyaasha iyo saaxiibada Koofurta Suudaan ee ku aadan taageerada dib u heshiisiinta, nabadda iyo xasiloonida Koofurta Suudaan.
Nin Dil Qisaas ah Lagu Fuliyey Magaalada Luuq (Dhageyso)
Madaxweynaha Jubbaland Oo Xilkii Ka Qaaday Gudoomiyaha Gobalka Gedo
Wzqayf bbydzn Cialis delivered overnight generic cialis 2019
Emiyyn kwzkjp Buy viagra australia when does cialis go generic
Vddcdw kvglek Cialis for Sale cialis 5mg price
Kmsrch byfrzb Cialis online store canadian online pharmacy
Xildhibaanada oo Ka Dooday ilaalinta bedqabka dhulka iyo xuduudaha Soomaaliya, Loona qebiyay ka hortagga lacag dhaqidda iyo maalgashiga argagixisada.
Kaydka Goobjoog Select Month July 2020 (145) June 2020 (511) May 2020 (307) April 2020 (264) March 2020 (227) February 2020 (211) January 2020 (171) December 2019 (174) November 2019 (153) October 2019 (168) September 2019 (169) August 2019 (238) July 2019 (230) June 2019 (233) May 2019 (236) April 2019 (172) March 2019 (195) February 2019 (173) January 2019 (249) December 2018 (261) November 2018 (235) October 2018 (297) September 2018 (366) August 2018 (329) July 2018 (310) June 2018 (295) May 2018 (348) April 2018 (366) March 2018 (358) February 2018 (421) January 2018 (616) December 2017 (337) November 2017 (356) October 2017 (360) September 2017 (323) August 2017 (399) July 2017 (309) June 2017 (360) May 2017 (411) April 2017 (429) March 2017 (394) February 2017 (391) January 2017 (455) December 2016 (424) November 2016 (486) October 2016 (595) September 2016 (421) August 2016 (479) July 2016 (344) June 2016 (359) May 2016 (332) April 2016 (327) March 2016 (373) February 2016 (350) January 2016 (313) December 2015 (266) November 2015 (278) October 2015 (372) September 2015 (408) August 2015 (441) July 2015 (445) June 2015 (468) May 2015 (456) April 2015 (7) March 2015 (7) February 2015 (10) January 2015 (155) December 2014 (627) November 2014 (639) October 2014 (400) September 2014 (351) August 2014 (294) July 2014 (203) April 2014 (1) January 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (1) May 2013 (1) July 2012 (1) July 2011 (1) June 2011 (2) May 2011 (1) February 2011 (1) November 2010 (1) February 2010 (1)
Cuubln zmexsx best online pharmacy Tlaai...
Hqhecm owvojn pharmacy online Cdpav...
Isrsdd nskxjm walmart pharmacy Rqtir...
Phqqhp kviibp canadian pharmacy Yciwd...